I-SEO PowerSuite: Izindlela ezi-5 Ezisheshayo Zokuthola Imiphumela Yabanikazi Bamasayithi Amatasa | Martech Zone
NgoMgqibelo, Juni 18, 2016 NgoMsombuluko, Okthoba 18, 2021 U-Aleh Barysevich
Ukumaketha kwedijithali kuyisici sokumaketha ongeke ukwazi ukukuziba - futhi kumongo wayo yi-SEO. Cishe uyazi ngomthelela isu elihle le-SEO elingaba nalo kulo mkhiqizo wakho, kepha njengomthengisi noma umnikazi wesayithi, ukugxila kwakho kuvame kwenye indawo, futhi ukwenza i-SEO kube yinto ephambili engaguquguquki kungaba nzima. Isixazululo ukusebenzisa isoftware yokukhangisa yedijithali eguquguqukayo, enothe ngamakhono, futhi esebenza kahle kakhulu.
Faka SEO PowerSuite - i-repertoire ephelele yamathuluzi aklanyelwe ukukhulisa i-SEO yakho. Kulokhu okuthunyelwe, sizodalula izindlela ezinhlanu ongasebenzisa ngazo i-SEO PowerSuite ukukhulisa i-SEO yomkhiqizo wakho.
Qiniseka ukuthi Uyatholakala
Uma ufuna ukuthi isiza sakho sikhonjiswe futhi sibekwe ngokulinganayo, kubalulekile ukukwenza kube lula ngangokunokwenzeka ukuthi iGoogle ifune isiza sakho futhi ithole okuqukethwe kwayo. Unalokho engqondweni, ukwakheka kwesiza kudlala indima ebalulekile ekukhombeni. Kalula nje, amawebhusayithi anesakhiwo esinengqondo kulula ngezinjini zokusesha ukukhasa nokukala.
Usebenzisa i-SEO PowerSuite, unganquma ikhwalithi yesakhiwo sesayithi lakho. Izici ezahlukahlukene ziyaqala ukusebenza - ngokwesibonelo, amakhasi abalulekile kufanele atholakale ekhasini lasekhaya, futhi okuthunyelwe kwebhulogi kufanele kuxhumane phakathi kwabo lapho kufanelekile ngokomongo. Ungasebenzisa i-SEO PowerSuite's WebSite Auditor ukubheka izinto ezinjalo.
Mane uye kuthuluzi le-WebSite Auditor, bese uqhafaza kufayela le- amakhasi ingxenye. Ngemuva kwalokho, buka i- Izixhumanisi Zangaphakathi Eziya Ekhasini ikholamu ukukhomba ukuthi imaphi amakhasi esizeni sakho angenazo izixhumanisi zangaphakathi ezikhomba kuwo.
Lokhu kuzokunikeza uhlu olungenzeka lokuthunyelwe namakhasi okufanele uthole izindlela zokuxhumanisa kuzo kusuka kwezinye izindawo zesayithi lakho.
Bheka Ukuthi Amakhasi Wakho Wewebhu Asemqoka Alayisha Ngokushesha Kwanele
Ijubane lewebhusayithi linomthelela omkhulu ekuhlelweni ngezizathu ezimbili:
Ijubane lesiza liyisici sokuma, okusho ukuthi amawebhusayithi ahamba kancane ngokuvamile abekwa ezingeni eliphansi.
Isivinini sesiza sakho sinomthelela oqondile kuzinga lokushaya.
I-Google nezinye izinjini zokusesha zibeka ukubaluleka okukhulu kumasiginali wesipiliyoni somsebenzisi. Olunye uphawu olunjalo isilinganiso sokubhampa, esingathinteka kakhulu ngejubane lesiza - abantu abaningi bazolinda imizuzwana embalwa (ikakhulukazi) ukuze isayithi lilayishe ngaphambi kokubhampa.
Usebenzisa i-WebSite Auditor, ungabona ukuthi imaphi amakhasi kuwebhusayithi yakho alayisha kancane. Vakashela i- Ukuhlolwa Kwekhasi imodyuli yethuluzi le-WebSite Auditor, bese ubheka isigaba sejubane lekhasi ukubona ukuthi amakhasi akho ayakuphumelela yini ukuhlolwa kwejubane kweGoogle:
Lapho usukhombe ukuthi imaphi amakhasi alayishwa kancane, ungathatha izinyathelo ukulungisa izingqinamba.
Bheka ubungozi be-Link Penalty
Izixhumanisi ezisezingeni eliphansi zingabeka isayithi lakho engcupheni yesigwebo seGoogle, ngokuya ngeSEO, okuyisichitho sakho esibi kakhulu. Uma ufuna ukugwema isijeziso esivela ku-Google, kuzomele ukwazi ukuthola izixhumanisi eziyingozi futhi uthathe izinyathelo zokuziqeda amandla.
With I-SEO PowerSuite's SEO SpyGlass, ungazitholela izixhumanisi eziyingozi ngokuzenzakalela kuphrofayela yakho ye-backlink futhi uvikele izinhlawulo zezixhumanisi ze-Google.
Konke okudingeka ukwenze ukuya kuthuluzi le-SEO SpyGlass bese ufaka isizinda sesayithi lakho. Ngemuva kwalokho, iya kuthebhu yesijeziso se-Link Penalty bese uqhafaza kusigaba se-Backlinks, esitholakala ohlangothini lwesobunxele. Lapho, uzokwazi ukufinyelela izibalo eziningi ezibalulekile, kufaka phakathi 'ubungozi benhlawulo' kusizinda sakho sonke.
Ngezansi kovavanyo olusheshayo lwe- Martech Zone. Njengoba ukwazi ukubona, ayikho neze ingozi yesijeziso, eyenziwe kahle!
Ngaphezu kwakho konke, ungabheka ubungozi benhlawulo ngezixhumanisi zakho ngokuchofoza okukodwa. Ngakho-ke, noma ngabe kungenxa yezixhumanisi ngazinye noma iqembu lama-backlinks, ungabona ingozi yakho yesijeziso lapho uthinta inkinobho.
Qalisa isivivinyo sobungani beselula
Njengoba ukuseshwa kwamaselula kuqala ukufana nenani lokuseshwa kwedeskithophu, ubungane beselula manje sebuyinto esezingeni elincane kuGoogle nakwezinye izinjini zokusesha. Ngamanye amagama, uma isiza sakho singenzelwanga iselula, singaba nomthelela omubi ezingeni lakho (ingasaphathwa eyomsebenzisi)
Ungasebenzisa i-WebSite Auditor ukwenza isivivinyo esivumelana neselula kuwebhusayithi yakho, ukubheka ukuthi iyadlula yini amazinga weGoogle. Uma isiza sakho singaphumeleli esivivinyweni, uzothola amathiphu okuthi ungenza kanjani isiza sakho sithuthukiswe kangcono ngeselula - ngokwesibonelo, umfundi akumele ukuthi azisondeze noma askrole kuwo wonke umakhalekhukhwini wakhe ukuze afunde okuqukethwe yikhasi lakho.
Yiya ku Ukuhlolwa Kwamasayithi isigaba sethuluzi le-WebSite Auditor ukuhlola isayithi lakho.
Uma isiza sakho singashayi magoli kahle, isisombululo esihle kunazo zonke ukwakha kabusha iwebhusayithi yakho ukuthi iphendule (uma ingekho). Ukutshalwa kwezimali ekwakhiweni - ikakhulukazi ukwakheka okusebenziseka kalula - kungakhokha izinzuzo kumiphumela ye-SEO.
Yenza Ucwaningo Lwesiza
Kungaba nezinkinga ezibucayi ngewebhusayithi yakho ongazazi, noma awunaso isikhathi sokuzihlola. Lokhu kungathinta igunya kanye nesikhundla sakho. Nge-SEO PowerSuite, uyakwazi ukufinyelela amathuluzi, afana ne- Ukuhlolwa Kwamasayithi ithuluzi, elingakhomba ngokuzenzakalela noma yiziphi izingqinamba ezibalulekile ngesayithi lakho.
Ukwenza ukuhlolwa kwamasayithi okuphelele, vula uhlelo lokusebenza lwe-WebSite Auditor, bese uqala ukuskena iwebhusayithi yakho usebenzisa i- Ukuhlolwa Kwamasayithi ithuluzi:
Leli thuluzi lithola ngokuzenzakalela noma yiziphi izingqinamba zobuchwepheshe ezinganciphisa amazinga akho, likufundise ukuthi ungazilungisa kanjani izingqinamba, futhi likwazise nganoma yiziphi izinkinga ezisekhasini. Izinto ezinhle kakhulu.
I-SEO inomthelela omkhulu kumkhiqizo wakho kangangokuba kunzima ukukuziba. Kodwa-ke, uma ulwela ukubeka phambili umkhankaso wakho we-SEO, hlola i-arsenal ye-SEO PowerSuite yamathuluzi asebenzayo.
Zenza lula inqubo ye-SEO, zenze kube lula kakhulu futhi zisheshe kuwe ukubona noma yiziphi izingqinamba isayithi lakho elingaba nazo, futhi ekugcineni zingakusiza ukukhulisa izinga lesiza sakho.
Usebenzisa i-SEO PowerSuite, unga
Qinisekisa ukuthi isayithi lakho yakhiwe kahle
Bheka ukuthi iwebhusayithi yakho ilayisha ngokushesha
Hlola isayithi lakho ubungozi benhlawulo ye-backlink
Qalisa a ubungane beselula test
Yenza a ukuhlolwa kwesayithi okugcwele
Empeleni sisanda kuthinta ichopho leqhwa kule ndatshana, kepha okungenhla kufanele kube ngokwanele ukuthi uqhubeke nakho! Ungakwazi landa i-SEO PowerSuite mahhala kuwebhusayithi yethu esemthethweni.
Landa i-SEO PowerSuite Mahhala!
Ukudalula: Martech Zone isebenzisa i- I-SEO Powersuite isixhumanisi sokusebenzisana kulesi sihloko.
Tags: ukuhlolwa kwe-backlinkubungozi benhlawulo ye-backlinkingozi yokuxhumanisaubungane beselulaukuhlolwa kweselulaamandlaukusebenzisa ngokugcwele injiniseoUmkhankaso we-seoseo Poweruiteisakhiwo se-seoukuhlolwa kwamasayithiumcwaningi mabhuku wewebhusayithiisivinini sewebhusayithi
Ungawunciphisa Kanjani Umthelela Wokusesha Lapho Uthuthela Kwisizinda Esisha
Jun 26, 2016 ku-11: 25 PM
Isigaba sokuqala sihlasela ngempela. Abanikazi bamabhizinisi bamatasa baqhuba ibhizinisi kanti abezimakethe bamatasa ngokugcina lawo mabhasi ehamba. Bonke banezinto eziphuthumayo okufanele bazinakekele kaningi hhayi ukubeka phambili i-SEO. Ukugxila kuyo kuyinselele ngempela futhi lezi zindlela owabelane ngazo zilusizo ngempela kulabo ababele kuphela isikhathi esincane se-SEO kepha basafuna amagama abo angukhiye erenki ye-premium
Nov 22, 2016 ngo-6: 06 AM
Ukugcizelela nje ukuthi sibaluleke kangakanani isikhathi sokulayisha, lapho abantu bachofoza isixhumanisi, bazolinda cishe imizuzwana emihlanu ukuthi ikhasi liboniswe kahle ngaphambi kokuchofoza inkinobho engemuva kusiphequluli sabo bese bezama inhlanhla ngomunye umphumela wosesho! Gcina isiza sakho silula ngangokunokwenzeka futhi singabi neFlash!